Yiyiphi iReported Score okanye iBakala
Emva kokugqiba ukuvavanya, kwaye utitshala wakho ubuyisela ukuvavanywa kwakho kwibakala oqinisekileyo uya kukuthatha ukusuka kwiC ukuya kwi-B kumanqaku akho okugqibela, mhlawumbi uvakalelwa! Xa ufumana ikhadi lakho lokunika ingxelo, nangona kunjalo, kwaye ufumanisa ukuba ibakala lakho liyi-C, unako ukufumana amanqaku amanqanaba okanye ibakala elilingene ekudlaleni. Ngoko, yintoni amanqaku amaninzi? Masifunde!
Kuthetha ukuthini "ukukhangela kwikota"?
Amanqaku amaninzi okanye ibanga elilinganiselwe lilinganiselwe kwisethi yamabakala, apho isethi nganye ithwala inani elibalulekayo.
Masithi ekuqaleni konyaka, utitshala unika isilabhasi . Kulo, uchaza ukuba ibakala lakho lokugqibela liya kugqitywa ngale ndlela:
Ipesenteji yeBanga lakho ngodidi
Umsebenzi wasekhaya: 10%
Iingqinisiso zakho kunye nemibuzo eyanzima kakhulu kunomsebenzi wesikolo sakho, kwaye zombini uviwo lwakho lokugqibela kunye nokuhlolwa kokugqibela kwinqanaba elifanayo lebanga lakho njengemisebenzi yakho yasekhaya, imibuzo kunye neengcoko ezidibeneyo, ngoko nganye yezo vavanyo zithwala ubunzima ngaphezu kwesinye izinto. Utitshala wakho ukholelwa ukuba loo mvavanyo iyona nto ibalulekileyo ebangeni lakho! Ngako oko, ukuba u-ace umsebenzi wakho wesikolo, iincwadana kunye nemibuzo, kodwa ibhokhwe iimvavanyo ezinkulu, amanqaku akho okugqibela aya kuphelisa emanzini.
Makhe senze izibalo ukuba sibone indlela ukufakwa kwebakala kusebenza ngayo nenkqubo yokubala amanqaku.
Kuwo wonke unyaka, u-Ava uye wenza umsebenzi wakhe wesikolo waza wafumana i-A kunye ne-B kwimininzi yakhe kunye neengcoko. Ibanga lakhe lokugqibela laliyi-D kuba akazange alungiselele kakhulu kwaye loo mvavanyo ikhethiweyo. Ngoku, u-Ava ufuna ukwazi ukuba yimaphi amanqaku afanele afike ngawo ekuhlolweni kwakhe kokugqibela ukuze athole ubuncinane i-B- (80%) kumanqaku akhe okugqibela amanqanaba.
Nakhu oko amabakala ka-Ava abukeka njengamanani:
Umlinganiselo wasekhaya: 98%
Umyinge wekota: 84%
Umyinge wovavanyo: 91%
Ukufumana izibalo kwaye unqume ukuba yeyiphi inzame yokufunda i-Ava kufuneka ifake kuloo vavanyo lokugqibela , kufuneka silandele inkqubo e-3:
Misela i-equation nepesenti ye-Ava (80%) engqondweni:
H% * (umyinge ophezulu) + Q% * (Umlinganiselo we-Q) + E% * (Ngokomyinge) + M% * (M umlinganiselo) + F% * (Umyinge weF) = 80%
Emva koko, sandisa ipesenteji yebanga le-Ava ngokwemyinge kwiqela ngalinye:
Umsebenzi wasekhaya: 10% kwibakala * 98% kwicandelo = (.10) (. 98) = 0.098
Umyinge wekota: 20% kwibakala * 84% kwicandelo = (.20) (. 84) = 0.168
Umyinge wesilinganiso: 20% webanga * 91% kwicandelo = (.20) (. 91) = 0.182
I-Midterm: 25% webanga * 64% kwicandelo = (.25) (. 64) = 0.16
Ukugqibela: 25% kwibakala * X kwicandelo = (.25) (x) =?
Ekugqibeleni thina, sizongeze kwaye siphendule nge x:
Ngenxa yokuba utitshala kaAva usebenzisa amanqaku alinganisiweyo, ukuze afumane i-80% okanye iB-kwibakala lakhe lokugqibela, uya kufuneka athole amanqaku angama-77% okanye i-C ekuhlolweni kwakhe kokugqibela.
Ootitshala abaninzi basebenzisa amanqaku amaninzi kwaye bawagcina ngokulandelelana ngeenkqubo zokubamba nge-intanethi.
Ukuba awuqinisekanga nantoni na enxulumene nebakala lakho, nceda uxoxe nomfundisi wakho. Abaninzi abafundisi bebakala ngokuhlukileyo, kweso sikolo sinye! Misela i-aphoyintimenti ukuya kumabanga akho enye xa umlinganiselo wakho wokugqibela ungabonakali ngokufanelekileyo ngesizathu esithile. Utitshala wakho uya kuvuya ukukunceda! Umfundi onomdla wokufumana amanqaku aphezulu angakwaziyo ukuhlala emkelekile.
I-German Revolution ye-1918 ukuya kwe-19
I-15 Inomdla kakhulu iHarter Potter Spoofs